विन्डोज १० का लागि क्रोमकास्ट - डाउनलोड र सेटअप कसरी गर्ने - कसरी
विन्डोज १० का लागि क्रोमकास्ट - डाउनलोड र सेटअप (गाइड)
क्रोमकास्ट गुगल द्वारा एक लोकप्रिय स्ट्रीमिंग उपकरण हो। हामी सबै हाम्रो टेलिभिजनमा स्ट्रिमिंग सामग्रीको मजा लिन्छौं। Chromecast ले तपाइँलाई नयाँ कार्यक्रमहरू सजिलैसँग हेर्नको लागि सरल बनाउँदछ। धेरै व्यक्तिसँग सहज स्ट्रिमि forको लागि कम्प्युटरहरू छन्। प्रयोगकर्ताहरूले अब सजिलैसँग आफ्नो पीसीबाट Chromecast यन्त्रहरूमा सामग्री कास्ट गर्न सक्छन्। शानदार मनोरन्जनका लागि प्लेटफर्म प्रयोग गर्न यो सजिलो छ। यस गाईडमा हामी कसरी तपाइँको मनपर्ने भिडियोहरू, चित्रहरू र विन्डोज पीसीबाट धेरै चीजहरू सजिलैसँग कास्ट गर्ने भनेर प्रदर्शन गर्ने छौं।
धेरै विशिष्ट पीसी स्ट्रिमिंग बक्सहरू चाँडै अप्रचलित हुन जाँदैछन्। यदि तपाईंसँग पहिले नै Chromecast छ भने हाम्रो विशेषज्ञ गाईड जाँच गर्नुहोस्।
विन्डोजमा क्रोमकास्ट सेटअप गर्नुहोस् - गाइड
क्रोमकास्ट सेटअप गर्ने प्रक्रिया एकदम सरल छ। कुनै पनि सामग्री नि: शुल्क हेर्न यो एक उत्तम तरीका हो। जो कोहीले पनि आफ्नो कम्प्युटर मार्फत यो उपकरणको अन्वेषण गर्न सक्दछ। चरणहरू धेरै सहज छन्, र कोही पनि तिनीहरूलाई अनुसरण गर्न सक्दछन्। यसले विन्डोज १० उपकरणहरू सहित सबै प्लेटफर्महरूमा काम गर्दछ। यहाँ सबै विन्डोज प्रयोगकर्ताहरूका लागि हाम्रो विज्ञ सेटअप गाइड छ। स्ट्रिमिंग सेवा भुक्तानीहरूमा तपाईंको भार कम गर्न आज यसलाई प्रयास गर्नुहोस्।
पहिलो चरण अपेक्षाकृत सीधा छ। नयाँ प्रयोगकर्ताहरूले प्रारम्भिक क्रोमकास्ट सेटअप गाइड प्रदर्शन गर्नु पर्दछ।तपाईं यसलाई आफ्नो टिभी उपकरणमा चलाउन सक्नुहुनेछ। प्रयोगकर्ताहरूले आफ्नो टिभीको छेउमा सानो HDMI विस्तार प्लग गर्न आवश्यक छ। Chromecast लाई एक शक्ति स्रोतमा जोड्नुहोस्। यसले तपाइँलाई उपकरण माथि र चालु गर्न मद्दत गर्दछ। अब यो आसपासको कुनै पनि उपकरणबाट सामग्री कास्ट गर्न तयार छ।
धेरै जसो इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरू आफ्नो कम्प्युटरमा गुगल क्रोम चलाउँदै छन्। धेरै मानिसहरु मेरो जस्तो माइक्रोसफ्टको धार प्रयोग गर्छन्। त्यस्ता प्रयोगकर्ताहरूको लागि हामी सिफारिश गर्दछौं कि तपाई गुगल क्रोम ब्राउजर डाउनलोड गर्नुहोस्। तपाइँको पीसी बाट कास्टिंग सुविधा चलाउन यो एक अनिवार्य आवश्यकता हो। गुगल उपकरणले गुगल सफ्टवेयरको साथ राम्रो अन्तरक्रिया गर्दछ।
क्रोम डाउनलोड गर्नुहोस्
नयाँ क्रोमकास्ट प्रयोगकर्ताहरूले आफ्नो विन्डोज १० कम्प्युटरहरू मार्फत आफ्ना उपकरणहरू सेट अप गर्न सक्दछन्। यो सहजै हो र धेरै प्रयासको आवश्यक पर्दैन।तपाइँले भ्रमण गर्नुपर्नेछ निम्न लिंक । यसले उपकरण सेटअप पृष्ठमा लैजान्छ। यहाँ तपाईं पीसीबाट आफ्नो क्रोमकास्ट सेट अप गर्न प्रम्प्ट देख्न सक्नुहुनेछ। यो एक सीधा प्रक्रिया हो। यस पीसी बटन प्रयोग गरेर 'तपाइँको क्रोमकास्ट सेट अप गर्नुहोस्' मा क्लिक गर्नुहोस्।
तपाईंको क्रोमकास्टलाई उही वाइफाइ नेटवर्कमा जडानको आवश्यक छ। यो तुरून्त तपाईको उपकरण सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने सुनिश्चित गर्न यो सजिलो विधि हो। प्रयोगकर्ताहरू उही वायरलेस सेटि onमा हुनु आवश्यक छ। यो Chromecast उपकरणमा कास्टिंगका लागि आवश्यक आवश्यकता हो। यसले तपाइँको इन्टरनेट ब्यान्डविथको धेरै लिदैन।
हामी आशा गर्छौं कि गाईडले सेटअप प्रक्रियाको बारेमा तपाईका शंका हटाउन सक्षम भएको थियो। कसैको लागि पछ्याउन यो सीधा हो। यस विधि मार्फत सजिलै तपाईंको टिभीमा स्ट्रिम गर्न सुरू गर्नुहोस्। हामी यसलाई सिफारिस गर्दछ सबैलाई जो इन्टरनेटमा नि: शुल्क सामग्री प्राप्त गर्दछ। यो प्रत्यक्ष स्ट्रिमि forको लागि उत्तम छ।
विन्डोज उपकरण मार्फत कसरी कास्ट गर्ने?
विन्डोज १० प्रयोगकर्ताहरूले क्रोम ब्राउजर मार्फत गुगल क्रोमकास्टमा कास्ट गर्न सक्छन्।यो तपाइँको प्रयोगको लागि एक सरल र प्रभावी विधि हो। हामी सुझाव दिन्छौं कि तपाईंले आज यसलाई प्रयोग गरेर हेर्नुहोस्। यहाँ चरणहरू छन्।
तपाईं भिडियो वा तस्वीर सामग्रीको साथ कुनै वेबसाईटमा गएर सुरू गर्न सक्नुहुन्छ। इन्टरनेट एक विशाल स्थान हो, र तपाईं साझा गर्न धेरै अविश्वसनीय शो, चलचित्र, र चित्रहरू पाउन सक्नुहुन्छ। ठूलो स्क्रिनमा सामग्री हेर्न यो उत्तम हो। यस मार्गनिर्देशनको लागि, हामी यूट्यूबमा एक अनियमित भिडियोको भ्रमण गर्दैछौं।
तपाईंको वेबसाइट स्क्रिनमा सामग्री कास्ट गर्न, तपाईं प्लेटफर्ममा दायाँ क्लिक गर्नुहोस्। यो सरल र धेरै प्रभावी छ। तपाईं तुरून्त कास्ट विकल्प देख्न सक्नुहुनेछ। कास्ट बटनमा क्लिक गर्नुहोस् र यसलाई तपाईंको क्रोमकास्ट उपकरणसँग सजिलैसँग साझेदारी गर्नुहोस्। यो जो कोही कम्प्युटरमा धेरै कार्यक्रमहरू, चलचित्रहरू हेर्नेका लागि उत्तम छ। यसले स्ट्रिमिंग पनि सरल बनाउँछ। प्रयोगकर्ताहरूले मा तेस्रो पक्ष स्रोतहरू मार्फत सामग्री व्यवस्थापन गर्न सक्दछन्इन्टरनेट
वैकल्पिक रूपमा, प्रयोगकर्ताहरूले उनीहरूको ब्राउजर स्क्रिनहरूको माथि दायाँ तीनवटा थोप्लाहरूमा क्लिक गर्न सक्दछन्। यसले विन्डोज १० उपकरणहरूको लागि कास्टिंग विकल्प ल्याउँदछ। तपाईंको कम्प्युटरमा सजिलैसँग Chromecast का साथ तपाईंको स्क्रिन साझा गर्न यसलाई प्रयोग गर्नुहोस्।
Chromecast का सुविधाहरू:
क्रोमकास्ट उपकरणसँग यसको प्रयोगका लागि धेरै फाइदाहरू छन्। हामी तपाईंलाई सिफारिश गर्दछौं कि तपाईले आज यसलाई प्रयोग गर्नका लागि यी सुविधाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो उचित मूल्यमा गुणस्तरीय मनोरन्जन चाहने जो कोहीलाई लागि उत्तम छ। यहाँ केहि महत्वपूर्ण Chromecast फाईदा छन्।
१. सयौं अनुप्रयोगहरूबाट स्ट्रिम गर्नुहोस्
क्रोमकास्टले हजारौं एन्ड्रोइड र आईओएस भिडियो र फोटो अनुप्रयोगहरूलाई समर्थन गर्दछ।यो पनि लोकप्रिय संगीत स्ट्रिमिंग सेवा Spotify को लागी समर्थन छ। जो कोहीले पनि आफ्नो पूर्ण मनोरन्जन समाधानको लागि यो उपकरण प्रयोग गर्न सक्दछ। यी अनुप्रयोगहरूमा तपाईंको फोनको पूर्ण नियन्त्रण छ। जो कोहीले इन्टरनेट मार्फत उनीहरूको स्क्रीन साझेदारी गर्न सक्दछ। प्रयोगकर्ताहरू रोक्न, प्ले गर्न, र उनीहरूको फोन मार्फत भोल्यूम बढाउन सक्दछन्। यो पर्याप्त सजीलो पहुँचयोग्य छ। सबै प्रमुख मनोरन्जन अनुप्रयोगहरू जस्तै नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम भिडियो, यूट्यूबले कास्टिंग सुविधालाई समर्थन गर्दछ।
गुगलले तिनीहरूका सबै उपकरणहरूको लागि ईकोसिस्टम तर्फ काम गरिरहेको छ। प्रयोगकर्ताहरूले अब उनीहरूको क्रोमकास्टसँग गुगल गृह / नेस्ट उपकरणहरू एकीकृत गर्न सक्दछन्।
यो तपाइँ तपाइँको मनपर्ने शो र आवाज आदेशहरू हेर्न सक्षम गर्दछ। तपाईंसँग यस विधि मार्फत पूर्ण स्वायत्तता हुन सक्छ। तपाईंसँग यो सेवा मार्फत स्ट्रिमि overमा पूर्ण नियन्त्रण हुन सक्छ। यो उत्तम आधुनिक दिनको मनोरन्जन संयोजन हो। हामी सबै टेक उत्साहीहरूलाई दुई उपकरणहरू पेयर गर्न सिफारिस गर्दछौं।
क्रोमकास्ट उपकरण बजारमा नयाँ छ। धेरै प्रयोगकर्ताहरू शानदार खेल सुविधाहरू प्रयोग गरीरहेका छन् जुन खरीदसँगै उपलब्ध छन्। तपाईं तेस्रो पार्टी कास्टिंग अनुप्रयोगहरू मार्फत लोकप्रिय शीर्षकहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। गुगल स्टेडिया सेवाले सबैलाई सजीलो रूपमा गेमिaming बनाउँदै छ।
यस सदस्यतासँग तपाइँसँग क्रोमकास्ट मार्फत गेमि ofको उत्कृष्ट अनुभव हुन सक्छ। जस्ट डान्स जस्ता स्वतन्त्र शीर्षकहरू पहिले नै कुनै अतिरिक्त सदस्यता बिना काम गर्दैछन्।
भ्रमण गर्नुहोस् - https://stadia.google.com/ ।
भविष्य सबै क्रोमकास्ट प्रयोगकर्ताहरूको लागि उज्यालो छ। हामी तपाईंलाई सिफारिश गर्दछौं कि आज तपाईं एक प्रीमियम अनुभव को लागी प्लेटफर्म को कोशिश गरीन्छ।
Chromecast धेरै पाठकहरूको लागि मूल कास्टिंग र स्ट्रिमि device उपकरण हो। यस मार्गनिर्देशनमा, हामी तपाइँको विन्डोज मेसिनबाट टिभीमा सामग्री स्ट्रिम कसरी गर्ने देखाउँदछौं। हामी आशा गर्दछौं कि हाम्रो गाइडले तपाईंको सबै प्रश्नहरूको उत्तर दिन्छ। यस उपकरण मार्फत हामीलाई तपाईंको स्ट्रिमिंग अनुभवको बारेमा बताउनुहोस्। तपाईंको ठुलो स्क्रीनमा असीमित मनोरन्जनको आनन्द लिने राम्रो समय लिनुहोस्।
पीसीमा नि: शुल्क फायर कसरी पाउने?
२०१ 2016 को लागि उत्तम एन्ड्रोइड इमुलेटर
टिभी कार्यक्रम अनलाइन reddit हेर्नुहोस्
म्याकको लागि vlc मिडिया प्लेयर
roblox कुनै join खेल बटन
hd चलचित्र अनलाइन डाउनलोड बिना नै हेर्नुहोस्
वाच श्रृंखला अनलाइन निःशुल्क
कसरी अवस्थित खाता मा विद्यार्थीलाई हाजिर गर्न